Copenhagen dia midika ara-bakiteny hoe "seranan-tsambon'ny mpivarotra". Tsy mahagaga raha amin'izao fotoana izao ny renivola danoà dia mahafaly ny mponina sy ny mpitsidika ao an-tanàna miaraka amin'ny fivarotana marika marobe, lasa izay sarotra ny mandalo ary tsy misy akory aza fivarotana fivarotana. Ireo mozika malaza marobe Prada, Ecco, Chanel, H & M, Cerutti, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Benetton, Diesel, H & M, Max Mara ary ny maro hafa no nandrakotra ny fivarotana renivohitra. Ankoatra ny fitafin'ny akanjo, Kopenhagen dia feno firavaka marevaka, kiraro tena tsara sy kanto, keramika, vokatra vita amin'ny fonosana, izay, eny an-dalana, ny entana nasionaly. Amin'ny ankapobeny, tampoka indray ary tsy miteny, dia andeha isika hiresaka amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa sy mba hiresahana momba ny fiantsenana any Danemark , indrindra fa any an-drenivohiny - Copenhagen.
Aiza no misy fivarotana?
Ny faritra be mpandeha an-tanety indrindra antsoina hoe Stroget dia ahitana karazana fivarotana maro any Copenhagen eny an-dalany. Eto ianao dia hahita akanjo avy amin'ireo marika lamaody manerantany, sy kiraro ary firavaka. Misy toeram-pivarotana sy toeram-pivarotana ao Strojeta, eo amin'ny fitoeran-javatra izay misy ny zava-drehetra - ary ny entana ho an'ny trano, sy ny sakafo ary ny akanjo, ary ny zavatra, ary ny fitaovana ao an-trano. Ny malaza indrindra dia ireo foibe ara-barotra Magasin du Nord sy i Illum. Ny voalohany, eny an-dalana, no ivontoeram-pivarotana lehibe indrindra any Skandinavia. Ny famokarana varotra Illum dia mivarotra marika amin'ny marika 400 maneran-tany. Paradisa ho an'ny mpivarotra!
Mendrika ihany koa ny "manodinkodina" ao amin'ny foiben'ny fivarotana lehibe eo akaikin'ny seranan'i Kastrup sy ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe Frederiksberg, izay miorina ao afovoan-tanàna.
Ny soso-kevitra dia ny hitsidika ny kianja Strædet, Købmagergade, Kronprinsensgade, Grønnegade, Ny Østergade, ny Trano Latina, ary Vesterbro sy Nørrebro. Afaka mankafy ny lovan'ny firenena ao amin'ny firenena ianao eto .
Orinasa, na ny fomba hanangonam-bola rehefa mividy marika
Mazava fa vitsy no afaka mividy akanjo marika amin'ny vidiny voalohany. Eny, mitohy ny vanim-potoana, ary tsy azo atao mihitsy ny mivarotra ny entana rehetra. Noho izany, misy ny toerana izay ahafahanao mahita ny marika sy ny kalitao amin'ny vidiny mora foana. Eto dia alefa ny entana izay tsy nahita ny mpividy ara-potoana. Sarobidy be ny fampirantiana any Copenhague, noho izany dia misy mihitsy aza ny Premier Outlet Center (Premier Outlets Center). Misy fivarotana am-polony amin'ny akanjo sy kiraro avy amin'ny marika malaza toa an'i Reebok, Hugo Boss, Woolford, Diesel, Ecco, Cerutti, sns. Ny akanjo avy amin'ny fanangonam-bola tamin'ny herintaona amin'ny fivarotam-be dia nividy 50% fihenam-bidy. Sarobidy, avo lenta, tsara tarehy - inona koa no tokony ataon'ny olona tsotra? Noho izany, ny fitsangatsanganana any Copenhague dia foana ny vahaolana mety sy ilaina.
Etsy ankilany, toy ny any an-kafa, ny vidin'ny fivarotana ao an-tanàn-dehibe sy ny tanàna dia samy hafa tanteraka, ka raha toa ka somary nihen-danja amin'ny vola ianao, dia makà any ambanivohitra. Trano fivarotana maro any Copenhague dia manana rafitra Tax-Free izay ahafahanao mamerina hatramin'ny 20% amin'ny vidin'ny fividianana, raha toa ka mihoatra ny 300 kroons. Mba hanaovana izany, anontanio ny mpivarotra hametraka fanamarinana, ary avy eo dia atolory amin'ny fomban-tseranana any amin'ny seranam-piaramanidina ny entana voaatoana miaraka amin'ny tapakila vita ary vita. Tokony hametraka mari-pamantarana eo amin'ny tapakila ny manampahefana maimaim-poana, ary io dia voarakitra ka azonao averina any aoriana kely ny vola.
Iza no te hitondra fanomezam-pahasoavana kely ho an'ny namana sy havana amin'ny dia? Mazava ho azy, ny rehetra. Ny vidin'ny trano fivarotana sy ny tranom-bakoka dia tena manaikitra. Ao amin'ny fivarotana Danish Souvenir Aps dia hahita fahatsiarovana ho an'ny tsiron-javatra rehetra, ary, indrindra indrindra, ho an'ny kitapo.
Raha eny, raha mpankafy tanana (zavatra vita tanana ianao), mandehana any Christiania . Nefa aoka ho mailo, satria Ao amin'ny hevitra niandohan'ny tanàn-dehibe malalaka amin'izao androntsika izao dia lasa sehatra goavana ho an'ny hippies, ary koa solontenan'ny torolàlana tsy nentim-paharazana. Ho an'ny mason'ireo mpizahatany "mpitsidika" maro dia misy antony marobe ihany no ho tohina - eny an-joron-trano rehetra dia mivarotra zava-mahadomelina, toy ny voninkazo kely. Na izany aza, raha tsy matahotra ny toe-javatra toy izany ianao, dia tsidiho azafady mba hitady ny fahatsiarovana tany am-piandohana tao amin'io tanàna miavaka io.
Azonao antoka fa hividy ho an'ny havan-tiana iray na olon-tianao ianao, ho marika kely ho an'i Copenhague - ilay Mermaid malaza (kopia kely amin'ilay tsangambato hita eo amin'ny sakan'ny Langelinia ). Noho ny habetsahan'ny entana Shinoa, ny fahatsiarovana tsara tarehy sy avo lenta dia mazava ho azy, mazava ho azy fa mila mitady azy, fa ho tsara ny mijery izany, mahatsiaro ilay dénoncée Danemark .
Danemark no toerana nahaterahan'ny mpamorona LEGO malaza, eto aty Billund, misy zaridaina lehibe ao Legoland - iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny tanàna. Ny fanomezana toy izany dia azo antoka fa ankafizin'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Isan-taona dia maro ireo karazan-tsakafo novolavolaina amin'ny lohahevitra samihafa, aleo any amin'ny mpivarotra ary fidio izay tianao. "Star Wars", "Harry Potter", "The Lord of the Rings", LEGO mifototra amin'ny lalao ordinatera sy ny maro hafa dia miandry amim-panetren-tena ny mpanjifany ao amin'ny toeram-pivarotan'ny toeram-pivarotana ankizy. Amin'ny toe-javatra faratampony, afaka mividy mpanamboatra tsy misy fepetra ianao.
Ny tsenan'i Copenhague
Hatramin'ny faran'ny lohataona ka hatramin'ny faran'ny fararano, ara-bakiteny any amin'ny distrikan'i Copenhague no ahitanao tsenam-pambolena, izay anton-javatra an'arivony miandry ny tompony vaovao. Ny tsena tranainy amin'ny Israel Plads no lehibe indrindra amin'izy ireo. Azonao atao ny mahazo azy amin'ny Metro Nørreport st. Tsara kokoa ny miditra aty aloha, satria amin'ny sakafo hariva ianao dia mahita mpizara tsy misy vidiny sy mpivarotra am-pifaliana.
Ny vokatra tsy dia mahaliana sy tsy manam-paharoa hitanao eo amin'ny tsenan'ny tarika madinika ao Thorvaldsens Plads. Izy no miasa, indrisy fa amin'ny zoma sy samedi ihany. Azonao atao ny manatona azy amin'ny Metro Kongens Nytorv na amin'ny bus 2A mankany Kastrup st ary 66 mankany Kvæsthusbroen. Ny Alahady eo amin'ny seranam-piaramanidina Charlottenlund no mitantana ny tsenan'ny piozila any Copenhague; eto koa dia tena mahaliana sy miaraka amin'ny gizmos vintana mora ihany.
Inona no ao Copenhague, inona no tsy ananantsika?
Ao amin'ireny faritra ireny no anaovana akanjo mendrika avoakan'ny trano fandroana, ny maha-tokana azy dia sarotra ny manadino azy. Mitady ireo entana ireo ianao any amin'ny foibe famaranana ao an-tanàna. Mety ho mahafinaritra koa ny mividy entana vita amin'ny pôrnelana sy kiran'ny tsiranoka, fantatra eran-tany.
Ny namanao dia mpankafy boky, ary mbola tsy fantatrao izay tokony hitondra azy ho fanomezana avy any Denmark? Ajanony ny safidinao amin'ny fanangonana ny tantaran'ny mpanoratra talenta tamin'ny taonjato faha XIX - Hans Christian Andersen. Aoka ho azo antoka: ny namana dia ho faly amin'ny boky, nividy tany an-tanindrazan'ilay tantara malaza.
Raha toa ka misy zava-pisotro misy anao manokana ny tianao sy ny tianao, dia aza miala ao Copenhagen raha tsy mividy Gammel dansk - zava-pisotro misy alkaola izay fisotroan'i Danes amin'ny sakafo maraina.
Ny mpankafy sôkôla dia tena nandrisika ny hividy Palegschokolade. Ao amin'ny boaty tsirairay dia misy tsaramaso mena 30 marevaka avy amin'ny teny danoina.
Ataovy azo antoka ny manandrana ny malaza any amin'ireo firenena Scandinavian ravinkazo. Amin'ny ankapobeny, betsaka ireo zava-maniry sy karazan-tsakafo "madio eo an-toerana", noho izany dia andramo manandrama sy mitondra any an-trano farafaharatsiny. Ny manandrana zavatra vaovao dia tena mahafinaritra kokoa noho ny mividy "lavaka" iray hafa, noho izany dia aza manangona vola ho an'ny fihetseham-po vaovao.
Greenland - zava-misy mahaliana
Copenhagen - tranombakoka
Ny lapan'i Lieben
Fonenana balidra matevina
Ny andro mahomby indrindra amin'ny famoahana
Firy ny kalôria anaty mofo?
Hairstyle ho an'ny lava lava lava
Ny cystis cervical
Dyslexia - inona moa izany, olona malaza amin'ny dyslexia
Ny legan'ny tendany avy amin'ny lohalika mankany an-tongotra
Inona no tokony ataoko aorian'ny taona faha-9?
Taom-baovao tao amin'ny fomba Sovietika
Zamiokulkas dia hazo dolara
Hazo arakaraka ny legioma
Lovia mavo 2013
Fanamboarana tongolobe amin'ny lohataona